रामधुनी नगर प्रमुखलाई ७ प्रश्न
स्थानीय - श्रावण ११, २०७६, शनिबार, रामधुनी
शिशिर भट्टराई । रामधुनी नगरपालिका सुनसरी जस्तो सुगम जिल्लाको नगरपालिका हो । पूर्वी तराइको नगर, त्यसमा इटहरी जस्तो निकै लोकप्रिय र शैक्षिक माहोल भएको शहरसँग सीमा जोडिएको नगर ।
यतिको ठाउँमा शिक्षा अबस्था कमजोर छ भन्दा अचम्म लाग्न सक्छ । जो कसैले पत्याउँदैनन् । पत्याउनेलाई लाग्ला अलिअलि कमजोर होला । खासै छैन होला । तर सोचेको जस्तो छैन । शिक्षा अवस्था कमजोर हैन, विजोग छ ।
नगरभित्रका केहि विद्यालयमा शिक्षक छैनन्, केहीमा विद्यार्थी । नगरको शैक्षिक अवस्था बुझ्नेको नौनाडी गलेर आउँछन् । रामधुनी वडा नं १ मा यस्तो विद्यालय छ जहाँ शिक्षक र कर्मचारी गरी ५ जना कार्यरत छन् । त्यसमा २ जना स्थाई शिक्षक ।
सरकारी नीति हेर्ने हो भने १ शिक्षक बराबर तराइको हकमा ५० जना विद्यार्थी हुनुपर्ने हो । तर उक्त विद्यालयमा त्यो मापदण्डको पुरा छैन । उता रामधुनी मै त्यस्तो विद्यालयपनि छ । जहाँ १ शिक्षकको दरबन्दी छ तर विद्यालयमा विद्यार्थी भरिभराउ छन् । त्यहाँ निजि स्रोतबाट शिक्षक राख्दा असहज भइरहेको छ । तर सरकारी निकायले त्यहाँ थप शिक्षकको व्यवस्था गर्न चासो राखेको छैन ।
रामधुनीको एकमात्र क्याम्पस भादगाउँ सिनवारीको अवस्था पनि दयनीय छ । शैक्षिक गुणस्तर कमजोर भएकाले सामुदायिक क्याम्पस भएपनि विद्यार्थी अभावका कारण लगभग बन्द हुने अवस्थामा छ । यदि यसलाई बेलैमा सुधार गर्न नसके भोलि यो बन्द नहोला भन्न सकिदैन ।
यसरी हेर्दा तल्लो तह पढाइ हुने विद्यालय देखि उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने सामुदायिक विद्यालयसम्म्को शिक्षाको गुणस्तर र विद्यालय व्यवस्थापनको क्षेत्र भद्रगोल अवस्थामा छ । निजि विद्यालयको बढ्दो प्रभाव र सामुदायिक विद्यालयको खस्कदो साखले गर्दा नगरभित्रको शिक्षा दिनप्रतिदिन दयनीय बन्दै गइरहेको छ । रामधुनीमा शिक्षा क्षेत्र कमजोर बनाउने जवर्जस्त फ्याक्टरहरु यी हुन् :
शिक्षामा जनप्रतिनिधिकै लगानी
विद्यालय शिक्षालाई नियन्त्रण र नियमन गर्ने जिम्मेवारी पाएका स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरु स्वयम् शिक्षामा ब्यापार गरिरहेका छन् । आफैं नेतृत्वमा बस्ने अनि निजि विद्यालयमा पैसा लगानी गर्ने र अभिभावकहरुसँग चर्को मूल्य असुल्ने लचारी धन्दामा जनप्रतिनिधि लाग्नु लाजमर्दो र गैरजिम्मेवारीपना हो ।
रामधुनीका केहि जनप्रतिनिधिहरुले पनि निजि विद्यालयमा लगानी गरेका छन् । त्यसकारण उनीहरु निजि विद्यालयको रबैया बिरुद्ध बोल्दैनन् । घुमाउरो पाराले सपोर्ट गर्छन् र सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक विकासमा चासो राख्दैनन् ।
कार्यकर्ताको निजी विद्यालय
स्थानीय सरकारमा अहिले जो कार्यरत छन् । उनीहरुलाई सत्तामा पु¥याउने कार्यकर्ताहरु शिक्षा क्षेत्रमा माफिया बनेका छन् । आफ्नो पार्टीको ब्यक्ति सत्तामा पुगेको भन्ने आडमा उनीहरु जिजि विद्यालय मनपरी ढङ्गले चलाइरहेका छन् ।
त्यस्ता कार्यकर्ता रिझाउन र आफ्नो सत्तालाई दीर्घकालिन बनाउन जनप्रनिधिले सहयोग गर्दा रामधुनीको शिक्षा क्षेत्र कमजोर बन्दै गएको छ । प्राय बोर्डिङ् स्कुलका संचालकहरु कुनैनकुनै पार्टीको कार्यक्रममा आसनग्रहण गरिरहेको देख्न पाइन्छ ।
सामुदायिक विद्यालय कमजोर बनाउने र निजि विद्यालयमा हालिमुहाली गरेर अभिभावकको ढाड सेकिने गरी पैसा लिएर आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्ने दाउमा माफियाहरु लागेका छन् ।
त्यसमा स्वयम् जनप्रनिधिले नै प्रश्रय दिइरहेका छन् । होइन भने स्थानीय सरकार बनेको २ वर्ष बित्न लाग्दा शैक्षिक अनुगमनको प्रतिवेदनसम्म सार्वजनिक गर्न नसक्नुको कारण के हो ? स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिले अनुगनको नाममा भत्ता र सरकारी सुविधा बारम्बार प्रयोग गर्ने अनि प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने ?
त्यो अनुगमन गरेको हो की नाटक देखाको हो ? अनुगनको उपलब्धी के हो ? किन गर्ने अनुगमन ? २ वर्षसम्म अनुगन गरेर कति सरकारी सम्पतिको दुरुपयोग भयो ? आजसम्म गल्ति गर्ने कतिवटा विद्यालयलाई कारवाही भयो ? राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहन बापत कति पुरस्कार दिइयो ?
केन्द्र सरकारले शैक्षिक वर्षको सुरुमा भर्ना अभियान चलाउन स्थानीय सरकारलाई निर्देशन दियो । तर रामधुनीमा भर्ना अभियान चलेको देखिएन । केन्द्र सरकारको निर्देशन किन टेरेन स्थानीय सरकारले ? स्थानीय सरकारले शैक्षिक सुधारमा लाग्नुपर्ने हो । तर भर्ना अभियानमा नै चलाउन अटेर गर्छ स्थानीय सरकार ।
अनुमति विना निजि विद्यालय
रामधुनीमा करिब ३५ वटा निजि विद्यालय सञ्चालनमा छन् । तर धेरै विद्यालय अनुमति नै नलिइकन आफुखुसी सञ्चालित छन् । आफ्नो नगर क्षेत्रमा स्थानीय सरकारको अनुमति नलिइ विद्यालय सञ्चालन गर्न नपाउनुपर्ने हो तर धेरै निजि विद्यालयको मनपरी छ ।
कसैले तल्लो कक्षासम्म अनुमति लिएर माथिल्लो कक्षा चलाइरहेका छन् । आफूखुसी निजि विद्यालय चलाउने अनि विद्यार्थीको भविष्य माथि खेलबाड गर्दै आफन्त र परिवारका सदस्यलाई कर्मचारी नियुक्त गरेर जागिर खुवाने धन्दामा रामधुनीका पनि कयौँ निजि विद्यालय लागिपरेका छन् । तर आफ्नो राजनितिक भविष्य सुरक्षित राख्न त्यस्ता विद्यालयलाई कारवाही गर्ने हिम्मत जनप्रतिनिधिहरुसँग छैन ।
भिजन बिनाको शिक्षा
संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्र संस्थागत भएसँगै देशमा स्थानीय सरकारलाई निकै अधिकार दिइएको छ । स्थानीय जनप्रनिधिहरुमा अबको शिक्षा कसरी अगाडि बढाउने भन्ने स्पष्ट भिजन नहुँदा शिक्षा क्षेत्रमा सरकारी लगानी बालुवामा पानी जस्तै भएको छ ।
निजि विद्यालयलाई सञ्चालनका लागि दिइएको अनुमति पनि हचुवाका भरमा दिइएको छ । वडा नं ५ मा १३ ओटा निजि विद्यालय छन् जुन आवस्यता भन्दा धेरै हो ।
ब्यवस्थापन समितिमा राजनीतिकरण
विद्यालयको ब्यवस्थापन गर्न गठन भएको व्यवस्थापन समिति पनि बिभिन्न स्वार्थ पुरा गर्न राजनीतिक भागवण्डाका आधारमा निर्माण गरिन्छ । पार्टीगत राजनीति र गुटबन्दीले गर्दा विद्यालय सुध्रनतिर भन्दा पनि अनावश्यक राजनीतिक किचलो तिर फस्ने गरेको छ ।
नागरिक समाज नहुनु
नागरिकका प्रत्यक्ष सरोकार र समस्याका बिषयमा सरकारी रबैयाको खबरदारी गर्ने निकायको रुपमा रामधुनीमा नागरिक समाज नहुँदा समस्या झन् चुलिएको छ । राजनीतिक दलले जनप्रतिनिधिसँग मिलेर गरेका नीतिगत भ्रष्टाचारको खबरदारी गर्ने निकाय नहुँदा जनताका समस्या जहाँका त्यहि हुने गरेका छन् । रामधुनीको शिक्षाक्षेत्रमा पनि नागरिक समाजको आवश्यकता प्रष्ट महसुुस भएको छ ।
रामधुनी नगरका मेयर (जयप्रकाश चौधरी)सावलाई मेरा ५ प्रश्न :
१.मेयरसाव तपाईसँग पर्याप्त अधिकार हुँदाहुँदै पनि किन रामधुनीको शैक्षिक सुधारमा कुनै पहल गर्नहुन्न ? वैशाखमा संघीय सरकारले १५ दिन भर्ना अभियान चलाउन स्थानीय सरकारलाई दिएको निर्देशन किन अटेर गर्नुभयो ? कि कता चलाउनुभयो ?
२.तपाईहरु विद्यालयको अनुगन गर्दैछौ भन्नुहुन्छ । स्थानीय सरकार बनेको २ वर्ष भयो । २ वर्षसम्म कस्तो अनुगमन गर्दैहुनुहुन्छ ? अनुगनको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ की पर्दैन ? अनुगमनका नाममा सरकारी गाडी र भत्ता मात्र लिएर राज्यको सम्पति दोहन गर्न मिल्छ र ?
३.स्थानीय सरकारलाई प्रशस्त मर्जरको ब्यवस्था छ । कमजोर विद्यालयलाई अनुगमन गरेर मर्जर गर्नुहोस । विभिन्न वडामा कतै शिक्षक कतै अभिभावक छैनन् । बक्लौरीको १३ बालबालिका आधारभुत विद्यालयमा शिक्षकको अभाव छ । विद्यार्थी नै नभएको विद्यालयलाई किन मर्जर गर्नहुन्न ? अधिकार छैन, कानुन छैन, भन्नुहुन्छ । एकपटक मर्ज गरेर जनतालाई देखाउन सक्नुहुन्छ नि । यो भन्दा अगाडि शिक्षक सरुवा सम्बन्धि स्थानीय सरकारको निर्णयलाई अदालतले सदर गरिदिएको दृष्टान्त छ मेयरसाव । त्यसपछिको परिस्थितिको सामना जनताले गर्नेछन् । त्यो नेपालको संविधानमा स्पष्ट लेखिएको कुरा हो ।
४.अनुमति विना चलिरहेका, आफ्ना नजिकका व्यक्तिलाई कर्मचारीको नियुक्त गर्ने र अभिभावकसँग चर्को मूल्य लिने निजि विद्यालयलाई किन कारवाही गर्न सक्नुहुन्न ? रामधुनी ३ पानीट्याङ्कीमा रहेको नोवल हाइस्कुल नामको निजि विद्यालय संचालनमा छ । तर उक्त विद्यालयले नगरपालिकामा कुनै अनुमति लिएको छैन र सम्पकै राखेको छैन भनेर शिक्षा साखका कर्मचारीले जानकारी दिए । रामधुनी प्याब्सनमा यो कुरा राख्दा पनि उक्त विद्यालय आबद्ध नभएको पाइयो । यो त प्रतिनिधि विद्यालय मात्र हो । त्यस्ता थुप्रै विद्यालय छन् । त्यस्तो विद्यालयलाई कारबाही गर्न तपाई किन सक्नुहुन्न ? कि तपाइलाई कसले दवाव दिन्छ । शिक्षा नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्न भने हात उठाउनुहोस जनताले आफै सुधार्छन । होइन भने तपाइ एक्सन लिनुहोस मेयरसाव ।
५.कतिपय सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारी समयमा आउँदैनन् । राम्रो पढाउँदैनन् । त्यस्ता विद्यालय र गलत शिक्षकलाई खोइ तपाइँले कारवाहिको दाहेरामा ल्याउँनुभएको ?
६.योजना र भिजन विना नै तपाईहरु अगाडी बढ्ने हो भने स्थानीय सरकारको औचित्य के ? जनता माविमा प्राविधिक शिक्षा आएको छ । त्यसलाई मलजल गर्न र थप प्रभावकारी बनाउन किन योजना बनाउनुहुन्न ?
७. रामधुनीको एकमात्र क्याम्पस भादगाउँ सिनवारी क्याम्पसको बिकास तपाइँको अधिकारक्षेत्रमा त पदैन । तर तपाईँ नगरपिता भएको हैसियतले क्याम्पस सुधार तपाईको नैतिक जिम्मेवारीको पाटो हो । मैले थाहा पाएअनुसार क्याम्पस सञ्चालनमा नगरले पनि सहयोग गर्नेगरेको छ । तर कुनै शैक्षिक उपलब्धि छैन । यो क्याम्पसमा कि अनावश्यक नगरको लगानी बन्द गर्दिनुहोस कि क्याम्पस र शिक्षाको सुधारमा कम्मर कसेर लाग्नुहोस । क्याम्पसको खाजिमै आज धेरै विद्यार्थी गार्डीमा इटहरी धाइरहेका छन् । त्यसमा तपाइँको चित्त दुखेको छैन मेयरसाव ?